Garsoorayaal Soomaaliyeed oo dhex-dhexaadin doona kullan ka tirsan CAF Confederation Cup – Gool FM
Garsoorayaal Soomaaliyeed oo dhex-dhexaadin doona kullan ka tirsan CAF Confederation Cup
jilacow August 16, 2018
(Muqdisho) 16 Agoosto 2018. –Garsoorayaal Soomaaliyeed ayaa ka amba baxay garoonka Aadan Cadde iyagoo kusii jeeda Jamhuuriyada Dimuqaraadiga Congo si ay u dhex dhexaadiyaan kullan ka tirsan CAF Confederation Cup
Garsoorayaasha Soomaaliyeed ayaa dhex dhexaadin doono kullan ay isaga hor imaanayaan Vita Club iyo Raja Casablanca oo ka kala dhisan wadamada Congo iyo Marocco.
Xasan Maxamed Xaaji (Xasan Bari) ayaa noqondoona garsooraha dhexe ee ciyaarta halka calanwalaha 1-aad uu yaha Xamza Xaaji, calan-sidaha 2-aadne waa Mahad Gentelman, halka sarkaalka 4’aad uu yahay Cumar Cartan.
Kullankii koowaad ee labadaan kooxood ayaa dhacay 6-dii May 2018 –kii , waxaana lagu ciyaaray magaalada Casablanca xilli kullankaas uu ku soo dhamaaday 0-0.
Ciyaarta labaad oo ay dhex dhexaadin doonaan garsoorayaasha Soomaaliyeed ayaa ka dhici doonta magaalada Kinshasa ee Congo waxaana ay soo dhici doontaa Axadda ina soo aadan oo ay taariikhdu ku began tahay 19-ka bishaan.
Sikastaba kooxda Raja ayaa hoggaaminaysa guruubka A, iyadoo wadata siddeed dhibcood, halka Vita Club ay leedahay toddobo dhibcood.
Sheekada Pogba iyo Mourinho oo BARAKAMALEEY Gaartay....(Laacibka reer France oo lagu Amray inuu...)
“Waa qasaare xoogan dhaawaca De Bruyne, laakiin waxaan heysanaa wax ka badan hal bedel”…Kyle Walker